YEYINTNGE(CANADA): Friday, May 23
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 5/23/20080အကြံပြုခြင်း
Science Matters by David Suzuki & Dr. Faisal Moola
May 22, 2008 11:20
Quebec con who weighs 430 pounds gets reduced sentence because of weight
MONTREAL - A former chef who goes by the nickname "Big Mike" has had his sentence for drug trafficking reduced because the provincial jail where he's incarcerated isn't dealing with his 430-pound weight.
Michel Lapointe has already served 20 months behind bars awaiting sentencing in what his lawyer described in court as hellish conditions. "For the first eight months he didn't haveabed adjusted to his size," defence lawyer Clemente Monterosso said in an interview Thursday.
"He never gotachair adjusted to his size. The chair and the tables were too tight and he could not sit down. In jail, the chairs are bolted to the ground and you cannot adjust them."
Monterosso said jail officials refused to provideachair withaback to accommodate Lapointe's tattooed bulk - jail chairs are more like stools - saying they feared it could be broken and used asaweapon.
The poor prison diet has added more than 50 lbs to the Lapointe's pre-arrest weight of 375 pounds.
Where the shaven-headed convict consumed six pills of medication upon arrival in jail, he now must take 23. It was also hard for Lapointe to takeashower.
"He's only 37 years old but now his health situation has deteriorated to the point that now he has to walk withacane," Monterosso said. "He's been asking forabetter diet but of course they refused that to him, telling him he's in jail, he's not inahotel and there's only one menu."
Lapointe was arrested during police raids on Sept. 20, 2006, that netted 24 others. He pleaded guilty in February to charges of conspiracy, drug trafficking and gangsterism.
He was sentenced to five years in jail Wednesday but under the formula used to calculate actual time behind bars, Lapointe will be out in about 14 months. Quebec court Judge Marc Bisson also showed clemency in his case because of Lapointe's weight problems.
He also ordered the prison to get Lapointeaproper bed and chair.
Claire Lapointe, Big Mike's mother, says her son has always had weight problems but they were exacerbated by his time behind bars and his health suffered.
"I think it'saterrible situation," she said in an interview. "Happily, the judge's decision yesterday was good, thanks for that, and I hope it will bear fruit.
"I hope it will serve to help other people who have the same health problems who unfortunately have to spend time behind walls."
The mother said earlier attempts to better her son's situation in detention were ignored by officials.
Monterosso said the problem accommodating special-needs convicts is particular to Quebec provincial jails and Lapointe would get better treatment inafederal prison.
Monterosso cited several other cases in seeking compassion for Lapointe before the court.
They included the case of an anglophone biker from Ontario who was locked up inamajority francophone environment, far from his family.
Other cases involvedaconvicted police officer in Alberta who faced potential harm by being in close contact with people he had helped put in jail.
Clemency has also been granted in the past because of overcrowding in Toronto-area jails and the lack ofavegan diet foraBritish Columbia convict.
Unimin Canada Ltd. fined $200,000 after death of worker at mining facility
May 22, 2008 09:24
PETERBOROUGH, Ont. - Toronto-based Unimin Canada Ltd. has been fined $200,000 and one of its supervisors was fined $20,000 after pleading guilty in the death ofaworker at its facility in Nephton, Ont.
The worker was killed on Feb. 27, 2006, when he went to check onabin of nepheline syenite ore, which is used to manufacture glass, ceramic and fibre-optic products.
In cold temperatures, the material can clump and freeze.
The worker was later found engulfed by nepheline syenite atachute at the bottom of the ore bin, and the cause of death was determined to be compression asphyxia.
A Ministry of Labour investigation determined the bin was not fenced or otherwise guarded to prevent access, in contravention of the Occupational Health and Safety Act.
Unimin and plant superintendent Chris Adams of Peterborough, Ont., pleaded guilty to failing to ensure the bin was fenced or otherwise guarded.
Toronto opens its doors
Chapel of St. James-the-Less will be open to visitors during Doors Open Toronto.
May 22, 2008 07:00
This year, Doors Open Toronto will be showcasing up to 150 venues of architectural, historic, cultural or social significance on Saturday and Sunday.
Among the 42 new sites on this year’s roster are many of the city’s finest churches, chapels, temples, synagogues and mosques. From architectural landmarks to hidden gems, doors will be open everywhere.
Review the listings, check hours and days of participation. The event officially runs from 10 a.m. to5p.m. both days. However, each building determines its own hours (and last admission times).
Look foraDoors Open Toronto banner at participating sites.
There are no tickets or pre-registration required. Admission is free. Program subject to change. And search the listings at toronto.ca/doorsopen. Here are butafew:
401 Richmond St. W.; Sat. & Sun.: 10 to 5
Home to more than 140 cultural producers and micro enterprises. Tours at 1 p.m. include window restoration demonstrations. Visit organic roof garden. Eleven on-site art galleries open Sat. only.
19 Horticultural Ave.; Sat. & Sun.: 10 to 5
Tours of park and greenhouses, hands on environmental stewardship programs for families and story telling for children.
70 Berkeley St.; Sat.: 10 to5Sun.: 1 to 5
Formerly Toronto’s #4 Fire Station, converted intoatheatre in 1971-72. Self guided tour; archives and costume display.
528 Bathurst St.; Sat.: 10 to5Sun.: not open
Rare artifacts on display. Aboriginal leaders discuss significance of archaeologists working with First Nations traditionalists. City’s archaeological Master Plan on display.
BAPS Shri Swaminarayan Mandir: MARBLE TEMPLE
See breathtaking architecture created from 24,000 pieces of hand-carved stone and marble by 1,800 craftsmen and volunteers. Tours.
Chapel of St. James-the-Less/ St. James’ Cemetery and Crematorium
635 Parliament St.; Sat. & Sun.: 1 to 4
This small funeral chapel isasplendid example of High Victorian Gothic design. Tour chapel and Toronto’s oldest established cemetery.
Design Exchange (former Toronto Stock Exchange)
Tour the ground floor, grand staircase and restored trading floor with spectacular murals by Charles Comfort. Exhibition on iconic 1960s Clairtone stereos.
စုကြည်ရဲ့ ရှေ့နေတဦးက စနေနေ့ကျော်သွားလျှင် နေအိမ်မှာအကျယ်ချုပ်ချထားဖို့ တရားဥပဒေ
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဥပဒေများအရ လူတဦးတယောက်
အား တရားမစွဲ၊ ရုံးမတင်ဘဲ ၅ နှစ်ပဲ ထိန်းသိမ်း
ထားခွင့်ပြုထားလို့ အမေရိကန်အခြေစိုက် ရှေ့နေ ဂျာရတ်ကင်ဆာက ထောက်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါ
ချထားမှု နောက်ဆုံးတနှစ် သက်တမ်းတိုးခဲ့တာ
စနေနေ့ည သန်းခေါင်အချိန်မှာ သက်တမ်းစေ့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာစစ်အစိုးရက နိုင်ငံခြားက အကူအညီပေးရေး လုပ်သားအားလုံးကို မြန်မာနိုင်ငံကို ၀င်ရောက်ခွင့်ပေးပြီး လေဘေးဒဏ် ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းတွေ လုပ်ကိုင်ဖို့ သဘောတူလိုက်တဲ့ အကြောင်း ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီမွန်းက ပြောပါတယ်။
ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီမွန်းနဲ့ စစ်အစိုးရ ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေတို့ ဒီနေ့ နေပြည်တော်မှာ ၂ နာရီကျော်ကြာ ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး တဲ့နောက် မစ္စတာ ဘန်ကီမွန်းက အခုလို ကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလို စစ်အစိုးရဘက်က သဘောတူလိုက်တာဟာ မြန်မာပြည် နာဂစ်ဆိုင်ကလုန်း မုန်တိုင်းဒဏ် ခံလိုက်ရပြီးတဲ့နောက် ထူးခြားတဲ့ ပြောင်းလဲမှု တစ်ခု ဖြစ်တယ်လို့လည်း ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ်က ပြောပါတယ်။
စောစောပိုင်းတုန်းကတော့ မြန်မာစစ်အစိုးရက နိုင်ငံခြားက လေဘေးဒဏ် ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်သားတွေ တိုင်းပြည်အတွင်း ၀င်ရောက်ပြီး ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းတွေ အပြည့်အ၀ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခွင့် ခွင့်မပြုခဲ့ပါဘူး။
မစ္စတာ ဘန်ကီမွန်းဟာ မနေ့က ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းဒဏ် အကြီးအကျယ်ခံခဲ့ရတဲ့ ဧရာဝတီတိုင်းကို သွားရောက်ပါတယ်။ မုန်တိုင်းဒဏ် အဆိုးရွားဆုံး ခံရတဲ့နေရာတွေကို လေယာဉ်ပေါ်ကနေ ကြည့်ပြီး လေဘေးဒဏ် ကယ်ဆယ်ရေး စခန်းကိုလည်း သွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။
လေဘေးဒဏ်ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းမှာ မုန်တိုင်းကြား မိသားစု ဆုံးရှုံးသွားတဲ့သူတွေကို တွေ့ဆုံပြီး အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီမွန်းက မြန်မာနိုင်ငံမှာ လေဘေးဒဏ်ကြောင့် ဒုက္ခရောက်သူတွေထဲက ၂၅ % လောက်ကိုပဲ လောလောဆယ် အထိ အကူအညီ ပေးနိုင်သေးတယ်လို့ ကုလသမဂ္ဂက ပြောပါတယ်။
မြန်မာစစ်အစိုးရ ခေါင်းဆောင်တွေကတော့ ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းဒဏ်ကြောင့် အနည်းဆုံး လူပေါင်း ၇၈,၀၀၀ လောက် သေဆုံးပြီး ၅၀,၀၀၀ ကျော် ပျောက်ဆုံးနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ ကြေညာထားပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံက ဆိုင်ကလုံး ဘေးဒဏ်ခံခဲ့ရတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေကို အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုရဲ့ လူသားချင်း စာနာတဲ့ အကူအညီတွေ ပေးနိုင်ရေး ခွင့်ပြုဖို့အတွက် အမေရိကန် သမ္မတကတော် လော်ရာဘုရှ် (Laura Bush) က မြန်မာ စစ်အစိုးရကို ထပ်မံ တောင်းဆိုပါတယ်။ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့ အကူအညီ အထောက်အပံ့တွေကို ပေးဖို့အတွက် ဘာမှ ချွင်းချက်ထား ကန့်သတ်တာတွေ မထားဘူးလို့လည်း သမ္မတ ကတော် လော်ရာဘုရ်ှက IBB အမေရိကန် အစိုးရရဲ့ နိုင်ငံတကာ အသံလွှင့်ဌာနကို ပြောပါတယ်။
မြန်မာ အစိုးရအနေနဲ့ ဒီအကူအညီ လေယာဉ်တွေကို ဆင်းသက် ခွင့်ပြုတယ်ဆိုတဲ့ အတွက်လည်း ကျမအနေနဲ့ ၀မ်းမြောက်မိပါတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း အမေရိကန် ရေတပ် သင်္ဘောတွေကိုလည်း အလားတူ ကမ်းဆိုက်ခွင့် ပေးဖို့ လော်ရာဘုရ်ှက မြန်မာ စစ်အစိုးရကို တောင်းဆိုခဲ့ ပါတယ်။ လေယာဉ်နဲ့ သယ်လို့မရတဲ့ အထောက်အပံ့ ပစ္စည်းတွေကို သင်္ဘောတွေနဲ့ပဲ သယ်ဆောင် နိုင်တာကြောင့်ပဲ ဖြစ်တယ်လို့ သမ္မတကတော် လော်ရာဘုရ်ှက ပြောပါတယ်။
သင်္ဘောထဲမှာ ပင်လယ် ဆားငန်ရေကနေ သောက်ရေသန့် အဖြစ် စစ်ထုတ်လို့ရတဲ့ ပစ္စည်း ကိရိယာတွေလည်း ပါဝင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ရေကြီးတဲ့ နေရာတွေကို ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်သားတွေ ထောက်ပံ့ ပစ္စည်းတွေ သယ်ဆောင်ဖို့အတွက် ရဟတ်ယာဉ်တွေလည်း ဒီသင်္ဘော ပေါ်မှာလည်း ပါရှိတယ်လို့ သမ္မတကတော် လော်ဒါဘုရ်ှက ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
အခုဆိုရင်တော့ အမေရိကန်ဘက်က အထောက်အပံ့ လေယာဉ်တွေ အစီးပေါင်း (၄၀)စာ မြန်မာ နိုင်ငံကို မုန်တိုင်းဒဏ်ခံထားရတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေအတွက် ပို့ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ မနေ့ကတော့ မြန်မာအစိုးရ သတင်းစာမှာတော့ အမေရိကန်ရဲ့ အထောက်အပံ့တွေပါ အနောက်ကနေပြီး နှောင်ကြိုး ပါတယ်လို့ ဝေဖန်ဆောင်းပါးရေးထားပါတယ်။
ကို နိုင်ငံတကာအကူအညီတွေ ထိထိ
ရောက်ရောက် ပေးပို့နိုင်ရေးအတွက် နိုင်ငံ
တကာ ညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့တခုကို ဖွဲ့စည်းထားပြီး
ပြီဖြစ်ပြီး ဒီအဖွဲ့ဟာ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသိ
အမှတ်ပြု ထောက်ခံမှုကို ရရှိထားပြီးပြီလို့ အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအဖွဲ့ (ASEAN) ရဲ့ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာ ဆူရင်
ပစ်ဆူဝန် (Dr. Surin Pitsuwan) က
ပြောလိုက်ပါတယ်။ သူဟာ မြန်မာပြည်ကို သွားရောက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက် ဘန်ကောက်မြို့ကို
ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကို ကိုယ်တိုင်သတင်းသွားယူခဲ့တဲ့
ဘန်ကောက်ရောက် ဗွီအိုအေ၀ိုင်းတော်သား ကိုကျော်ကျော်သိန်းက တင်ပြပေးထား
အာဆီယံအတွင်းရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာ ဆူရင် ပစ်ဆူဝန်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံကို နှစ်ရက်
ကြာ သွားရောက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက် ဒီကနေ့မှာပဲ မြန်မာနိုင်ငံကနေ ဘန်ကောက်မြို့ကို ရောက်လာတာပါ။ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်း သူ အဓိက မီးမောင်းထိုးပြောသွား
တာကတော့ မြန်မာနိုင်ငံက မုန်တိုင်းဒဏ်သင့်လူထုကို ကူညီရေးမှာ နိုင်ငံတကာနဲ့
မြန်မာနိုင်ငံကြား ညှိနှိုင်းဆက်စပ် ဆောင်ရွက်ပေးမယ့် အာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍ
ကုလသမဂ္ဂနဲ့ အာဆီယံတို့ပူးပေါင်းပြီး Coalition of Mercy ကရုဏာညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့လို့
ဆိုရမယ့် အဖွဲ့တခုကို ဖွဲ့စည်းပြီးပြီဖြစ်ပြီး အဲဒီအဖွဲ့ဟာ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသိအမှတ်
ပြုမှုကို ရရှိထားပြီးဖြစ်ကြောင်း မစ္စတာဆူရင်က ပြောပါတယ်။
“ညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့ကို ထူထောင်ပြီးပါပြီ။ ဒီအဖွဲ့ကို အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေက အတည်ပြုပြီးပါပြီ။ ကုလသမဂ္ဂက အတည်ပြုပြီး၊ အသိအမှတ်ပြုပြီး၊ ထောက်ခံပြီးပါပြီ။ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ ကမ္ဘာတ၀ှမ်းက အစိုးရတွေကနေ အတည်ပြုပြီး၊ အသိ
အမှတ်ပြုပြီး၊ ထောက်ခံပြီးပါပြီ။” လို့ မစ္စတာ ဆူရင် ပစ်ဆူဝန်က ပြောသွားပါတယ်။
ဒါ့အပြင် အဖွဲ့ဝင် ၂၂ ဦးပါ အာဆီယံလုပ်ငန်းအဖွဲ့၊ အဖွဲ့ဝင် ၉ ဦးပါ အခြေခံအလုပ်အဖွဲ့ စတာတွေကိုလည်း ဖွဲ့စည်းပြီးကြောင်း သူက ပြောသွားပါသေးတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၁၉ ရက်
နေ့က စင်ကာပူနိုင်ငံမှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ အာဆီယံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေရဲ့ အစည်း
အဝေးကနေ အာဆီယံသမိုင်းမှာ ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် အတွင်းရေးမှူးချုပ်ကို လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာတွေ အပြည့်အပ်နှင်းပြီး အဲဒီအစည်းအဝေးရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို မြန်မာစစ်အစိုးရရဲ့ ထိပ်ဆုံးအဆင့် တာဝန်ရှိသူတွေဆီထိ ပေးပို့ဖို့ မစ္စတာဆူရင်ကို
တနင်္ဂနွေနေ့ကျရင် မြန်မာနိုင်ငံကို အကူအညီပေးရေးဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာ ညီလာခံ
တခုကိုလည်း ရန်ကုန်မြို့မှာ ကျင်းပတော့မှာပါ။ ဒီညီလာခံကို ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေး
မှူးချုပ်၊ အာဆီယံ အတွင်းရေးမှူးချုပ်နဲ့ အာဆီယံနိုင်ငံတွေက ၀န်ကြီးအဆင့် တာဝန်ရှိ
သူတွေအပြင် အလှူရှင်နိုင်ငံတွေ၊ စိတ်ဝင်စားတဲ့ တခြားနိုင်ငံတွေလည်း တက်ရောက်
ကြဖို့ ရှိနေပါတယ်။ ဒီညီလာခံကနေ လက်ရှိပေါ်ပေါက်နေတဲ့ ကိစ္စရပ်တွေကို ရှင်းလင်း
အောင်လုပ်ဖို့၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့၊ လုပ်ငန်းအကောင်အထည် ဖော်မယ့်အဖွဲ့ကို
ထူထောင်ပြီး ထိထိရောက်ရောက် လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ ဆိုတာတွေကို ဆွေးနွေးသွားကြ
မယ်၊ နိုင်ငံတကာနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကြားမှာ ယုံကြည်မှုအဆင့်တဆင့်ကို တည်ဆောက်ကြ
မယ်လို့ မစ္စတာဆူရင်က ပြောခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာစစ်အစိုးရဟာ မုန်တိုင်းဒဏ်သင့်လူထုကို ကယ်ဆယ်ကူညီဖို့ နိုင်ငံတကာရဲ့ ကမ်းလှမ်းချက်တွေကို အပြည့်အ၀ လက်မခံဘဲ အချိန်တွေကြာနေခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာမှ
အခုလို အာဆီယံအဖွဲ့ကနေ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ နိုင်ငံတကာကြားမှာ ကြားခံအဖြစ်
ပြည်သူများကို ကယ်တင်ပါ၊ ဗိုလ်ချုပ်များကို ကာကွယ်နေရန် မလိုအပ်ပါ
ကျော်စွာမိုး | မေ ၂၃၊ ၂၀၀၈
နာဂစ်ဆိုက်ကလုန်း မုန်တိုင်း တိုက်ခတ်ဖျက်ဆီးခံရပြီးနောက် ပထမဦးဆုံး ကြုံတွေ့ကြရသည့် စိတ်ပျက်ဒေါသထွက်ဖွယ် အခြေအနေမှာ အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူများအတွက် မုန်တိုင်းကယ်ဆယ်ရေး နိုင်ငံတကာ အကူအညီများကို စစ်အစိုးရက ကန့်သတ်ချက်များ ပြုနေခြင်း ဖြစ်သည်။ စစ်အစိုးရက မုန်တိုင်းကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများကို အီလေးဆွဲ ဆောင်ရွက် နေပြီး၊ ကျိုးကြောင်းမလျော်ကန်သော ဆင်ခြေများဖြင့် နိုင်ငံတကာက အကူအညီပေးရန် ကြိုးပမ်းမှုများကို တင်းကျပ်စွာ ကန့်သတ် ချုပ်ချယ်ထားခဲ့သည်။ ဒုတိယအကြိမ် စိတ်ပျက်ဒေါသထွက်ကြရခြင်းမှာ အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံများအဖွဲ့ (အာဆီယံ) နှင့် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့တို့က ခေါင်းမာလှသည့် မြန်မာ စစ်ဗိုလ်ချုပ်များကို ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများ ထိရောက်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်စေရေးအတွက် တိုက်တွန်းနားချရန် မစွမ်းနိုင်ဘဲ တွေဝေဖင့်နှေးနေကြသည်။
ဤသို့ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် စွမ်းရည် စစ်အစိုးရတွင် ရှိမနေပါ။ စစ်အစိုးရ ကိုယ်၌က ညံ့ဖျင်း ဆိုးရွားလှသည့် အစိုးရတခုဖြစ်သည်။ စီးပွားရေး၊ လူမှုဖူလုံရေး၊ ပညာရေး စသဖြင့် မည်သည့်ခေါင်းစဉ်တပ်တပ် ကဏ္ဍ တိုင်းတွင် တိုင်းပြည်ကို ဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းရလေအောင် စီမံဖန်တီးခဲ့သူဖြစ်သည်။ ဤသို့ညံ့ဖျင်းသော စစ်ဗိုလ်ချုပ်များကို ချီးမြှောက် ပြောဆိုနေသူများလည်း ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါသည်။ ထိုသူတို့ကို အခွင့်အရေးမျှော်သမားများ၊ မျက်နှာလို မျက်နှာရ ခယနေကြသူများဟုသာ ခေါ်သင့်ကြပါသည်။
သို့သော်လည်း အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်အားလုံး၊ ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့ဝင်အားလုံးက အခွင့်အရေးသမားများ၊ အကျိုးစီးပွားမျှော်၍ ခယနေကြသူများ မဟုတ်ကြပါ။ သို့သော်လည်း ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်လှသည့်၊ ဒီမိုကရေစီ ကျင့်သုံးနေခြင်းမရှိသည့် စစ် အစိုးရကို ကာကွယ်ပေးနေကြမှုအတွက် သူတို့တွင် တာဝန်ရှိကြောင်း သမိုင်းတွင် မှတ်တမ်းကျန်ရစ်ခဲ့မည် ဖြစ်သည်။
၁၉၈၈ ခုနှစ်တွင် သွေးထွက်သံယို အာဏာသိမ်းပွဲဖြင့် လက်ရှိစစ်အစိုးရက စတင်အာဏာရယူလာခဲ့ချိန်မှစ၍ ကုလသမဂ္ဂ၏ အထူးသံကိုယ်စားလှယ်များက အမျိုးမျိုးသောခေါင်းစဉ်အောက်တွင် ခရီးစဉ် ၃ ဒါဇင်ကျော် မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်၍ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ လိပ်ခဲတည်းလည်းဖြစ်နေခဲ့သော နိုင်ငံရေးပဋိပက္ခ၊ ပြဿနာများ ပြေလည်စေရေး အတွက် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုများ ပြုခဲ့ကြသည်။
မကြာခဏ ဆိုသလိုပင် ကုလသမဂ္ဂ၏ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များကလည်း "စာမျက်နှာသစ် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီ"၊ "ပြေလည်စေ ရေးအတွက် လမ်းစပွင့်ပြီ" စသဖြင့်... ဆိုခဲ့ကြသည်။ သို့သော်လည်း ဤစာသားများက လက်တွေ့အခြေအနေကို ထင်ဟပ် နိုင်ခြင်း မရှိပါ။ တနည်းဆိုရသော် စစ်ဗိုလ်ချုပ်များကို ကာကွယ်ပေးရာ ရောက်နေပါသည်။
ယခုတော့ ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီမွန်း၏ အလှည့်သို့ရောက်လာခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။ မစ္စတာ ဘန်ကီ မွန်းက ကြာသပတေးနေ့တွင် နိုင်ငံတကာအကူအညီများနှင့် နိုင်ငံတကာ ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်သားများ ပြည်ဝင်ခွင့် ပိုမို ခွင့် ပြုပေးရေးအတွက် စစ်ဗိုလ်ချုပ်များကို တိုက်တွန်းနားချရန် ရန်ကုန်မြို့သို့ ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သည့် ၃ ပတ်အတွင်း စစ်အစိုးရက နိုင်ငံတကာ အကူအညီအနည်းငယ်ကိုသာ ခွင့်ပြုခဲ့ပြီး၊ အမှန်တကယ် လိုအပ်နေသူ ဒုက္ခသည်များထံသို့ လည်း အနည်းငယ်သာ ရောက်စေခဲ့သည်။ အာရှဒေသမှ ကျန်းမာရေး အကူအညီပေးရေးအဖွဲ့ အနည်းငယ်မှအပ၊ ကျန် ပြင်ပမှ နိုင်ငံခြားသား ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်သားများကိုမူ လုံးဝတားမြစ်ပိတ်ပင် ထားခဲ့သည်။
စစ်အစိုးရ၏ ဤသို့တင်းကျပ်ကန့်သတ်ထားမှုကို မစ္စတာဘန်ကီမွန်းကိုယ်တိုင်က စိတ်ပျက်ရကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ ပြီး ဖြစ်သည်။ တဖက်တွင်လည်း မြန်မာပြည်သူများက လွန်ခဲ့သည့် နှစ် ၂၀ အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံအရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ကုလသမဂ္ဂ၏ လုပ်နိုင်စွမ်းကို စိတ်ပျက်နေကြပြီ ဖြစ်သည်။
ယခုတော့ မုန်တိုင်းပြီးခဲ့သည်မှာ ရက်သတ္တ ၃ ပတ်ကျော်ခဲ့ပြီ။ အခုအချိန်မှ ကုလသမဂ္ဂအကြီးအကဲက စစ်ဗိုလ်ချုပ်များကို နားချရန် ရောက်လာသည်။ လေဘေးဒဏ်သင့် ပြည်သူများက ထောက်ပံ့ရေးအကူအညီများ အသည်းအသန်လိုအပ်နေကြ ပါသည်။ ယခင်ကုလက တလျှောက်လုံးဖော်ပြပြောဆိုခဲ့သလို အပြုသဘော တိုးတက်သယောင် ပြောဆိုနေမှု၊ နားဝင်ချို စေမည့် နှစ်သိမ့်စကားများကို မြန်မာပြည်သူများက မကြားလိုကြတော့ပါ။ မိကျောင်းမျက်ရည်ကျသယောင် ဟန်ဆောင်နေ မှုမျိုး မလိုလားကြတော့ပါ။
အာဆီယံအဖွဲ့ကရော ၎င်း၏အဖွဲ့ဝင် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် မည်သို့ ဆောင်ရွက်ပါမည်နည်း။ စင်္ကာပူနိုင်ငံတွင် ကျင်းပသည့် အရေးပေါ်အစည်းအဝေးက မုန်တိုင်းအပြီး ၂ ပတ်အကြာမှ ဖြစ်လာခဲ့သည်။ အာဆီယံအဖွဲ့က မြန်မာစစ်ဗိုလ်ချုပ်များကို တင်းတင်းမာမာ ရင်ဆိုင်လိုက်မည်ဟု မည်သည့်အခါမျှ သတ္တိမရှိခဲ့ကြပါ။ မြန်မာနိုင်ငံက အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာချိန် ၁၉၉၇ ခုနှစ်မှ စ၍ အာဆီယံအဖွဲ့က စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများ စိတ်အနှောက်အယှက် ဖြစ်စေရလောက်အောင် ဖိအားပေးလိုက်မည်ဟု မ၀ံ့ရဲ ခဲ့ကြပါ။
တနင်္လာနေ့တွင် ကျင်းပခဲ့သည့် အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးများ အစည်းအဝေးတွင် အဖွဲ့၏ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဆူရင် ပစ်ဆူဝမ် (Surin Pitsuwan) ကိုယ်၌က ဦးဆောင်မည့် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အထူးလုပ်ငန်း အဖွဲ့တခု ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ရန် သဘောတူခဲ့ကြပါသည်။ ဤအဖွဲ့က ကုလသမဂ္ဂနှင့်ရော၊ စစ်အစိုးရနှင့်ပါ အနီးကပ်ပူးတွဲဆောင်ရွက်သွားမည်ဟု ဆိုပါ သည်။ ၎င်း၏ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်တွင် "အာဆီယံအဖွဲ့က ဦးဆောင်သည့် ချည်းကပ်မှုသည် အကောင်းဆုံးရှေ့တိုး ဆောင်ရွက် နိုင်မည့် နည်းလမ်းဖြစ်သည်" ဟု ဖော်ပြထားခဲ့သည်။ ယခုကပ်ဘေးပြဿနာကိုလည်း နိုင်ငံရေးပြဿနာအဖြစ် အသုံးမချ ကြရန် တိုက်တွန်းထားသေးသည်။
အာဆီယံအဖွဲ့၏ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်တွင် မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် "နိုင်ငံတကာကယ်ဆယ်ရေး လုပ်သားများ ကပ်ဘေး သင့်ဒေသများသို့ ပိုမိုဝင်ရောက်ခွင့်ပေးသင့်ကြောင်း၊ လိုအပ်ချက်များမှာ အရေးပေါ်အခြေအနေ ဖြစ်ပေါ်နေပြီး မတွက်ဆ နိုင်သည့် အတိုင်းအတာအထိ လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ ကပ်ဘေးကြီးကျရောက်နိုင်ဖွယ် ရှိနေကြောင်း" တိုက်တွန်းထား သေးသည်။ အပြုသဘောဆောင်သည့် ကြားကောင်းသော စာသားများ ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြန်သည်။
သို့သော်လည်း အချက်က ရှင်းနေသည်။ ယခု "အကောင်းဆုံး ရှေ့ဆက်နိုင်မည့် နည်းလမ်း" ဆိုသည်မှာ အယုံအကြည် ကင်းမဲ့စရာကောင်းလှသော၊ အကြင်နာတရားမဲ့လှသော ဗိုလ်ချုပ်များအတွက် နားဝင်ခံသာစေမည့် အချိုသပ်လုပ်ရပ် နောက်တခုပင် ဖြစ်နေပြန်သည်။ အာဆီယံအဖွဲ့က အမှန်တကယ် ဦးဆောင်ဦးရွက်ပြုရန် အမှန်တကယ် ရည်ရွယ်ရင်း ရှိသည်ထားဦး၊ ၎င်းအဖွဲ့အနေဖြင့် ဤသို့ အတိုင်းအဆကြီးမားလှသည့် ကပ်ဘေးဒုက္ခကြီးကို ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်ရန် စွမ်းရည် ရှိမနေပါ။
၀မ်းနည်းစရာကောင်းသလို ပို၍ ရှက်ဖွယ်လိလိဖြစ်ရသည့် ကိစ္စမှာ အာဆီယံအဖွဲ့နှင့် ကုလသမဂ္ဂက ယခုတကြိမ်တွင်လည်း ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများ စည်းမျဉ်းချမှတ်နေသည်ကို လိုက်နာသဘောတူနေကြခြင်း ဖြစ်သည်။ သူတို့သာ အမှန်တကယ် ကပ် ဘေးသင့် ဒုက္ခသည်များကို ကူညီလိုပါက နည်းလမ်းအသစ်ဖြင့် ဦးဆောင်ဦးရွက်ပြုရန် သတ္တိပြရပါလိမ့်မည်။
အကယ်၍ ယခု မစ္စတာဘန်ကီမွန်း၏ ခရီးစဉ်တွင် အစစ်အမှန် လိုက်လျောလာမှု မရရှိခဲ့ပါက ကုလသမဂ္ဂတွင်ပြဌာန်းထား သည့် "ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုပေးခွင့် တာဝန်ဝတ္တရား" (Responsibility to Protect) အရ ကျင့်သုံးရုံမှတပါး အခြားနည်း လမ်း မရှိတော့ပါ။ ဤပြဌာန်းချက်က သဘာဝကပ်ဘေးများကဲ့သို့သော အခြေအနေမျိုးအတွက် အတိအကျသတ်မှတ် ပြဌာန်းမှု မဟုတ်သော်လည်း မည်သို့ဆိုစေ ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်ရန် ခိုင်လုံမှု ရှိနေပါသည်။ စစ်အစိုးရက လူသားမျိုးနွယ် တရပ်လုံးအပေါ် ကျူးလွန်နေသည့် ရာဇ၀တ်မှုသင့်နေပြီ ဖြစ်သည်။ ဤကဲ့သို့သော ပြဿနာမျိုးတွင် နိုင်ငံတကာမိသားစု က အရေးယူ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ယခုကဲ့သို့ ပြဌာန်းထားခြင်းလည်း ဖြစ်ပါသည်။
အမှန်တွင် ကယ်ဆယ်ရေးအကူအညီများနှင့် ကယ်ဆယ်ရေးကိစ္စများတွင် ကျွမ်းကျင်သူလုပ်သားများက မြန်မာနိုင်ငံနှင့် အဝေးတွင် ရှိနေကြသည် မဟုတ်ပါ။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှ ရေတပ်သင်္ဘော ၅ စီး၊ ပြင်သစ်နှင့် ဗြိတိန်နိုင်ငံတို့မှ ကယ် ဆယ်ရေး အကူအညီများကလည်း မြန်မာ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တွင် ဒုက္ခသည်များကို ကယ်ဆယ်ကူညီခွင့်ရရန် စောင့် ဆိုင်းနေကြပါသည်။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် ထုတ်ဝေသည့် စစ်အစိုးရ၏ "မြန်မာ့အလင်း" သတင်းစာက ဤနိုင်ငံများမှ အကူအညီ များကို မြန်မာပြည်သူများက လက်မခံနိုင်ကြောင်း ဖော်ပြထားခဲ့ပါသည်။
မိမိတို့တွင် နောက်ဆုံး စိတ်ပျက်ဒေါသထွက်စရာ အခြေအနေကို ကြုံတွေ့နေရပါသည်။ အမေရိကန်၊ ပြင်သစ်နှင့် ဗြိတိန် နိုင်ငံများက ကုလသမဂ္ဂနှင့် အာဆီယံတို့ မည်မျှ စွမ်းဆောင်နိုင်မည်ကို စောင့်ကြည့်နေကြပါသည်။ ယခုဆောင်ရွက်ချက် မှာ နောက်ဆုံးအကြိမ် ဆောင်ရွက်ချက်ပင် ဖြစ်သည်။
အကယ်၍ ကုလသမဂ္ဂနှင့် အာဆီယံအဖွဲ့တို့က ဒုက္ခသည်များကို ကူညီပေးရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ထိရောက်သောနည်းလမ်း များ ရှာကြံ မဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့လျှင်၊ မုန်တိုင်းပြီး၍ အသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့သူများ၏ အသည်းအသန် အခြေအနေကို အနောက်နိုင်ငံကြီးများက အကြီးအကျယ် ပြစ်တင်ဝေဖန်ရုံသာပြုပြီး လက်တွေ့မဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့လျှင် ပို၍ အကြီး အကျယ် စိတ်ပျက်ဒေါသထွက်ကြရလိမ့်မည် ဖြစ်သည်။
သက်ဆိုင်သူအားလုံးအနေဖြင့်လည်း အပြစ်သင့် အရှက်ရပြီး၊ ပြစ်တင်ဝေဖန်မှုများကိုလည်း နှစ်ပေါင်းများစွာ ခံကြရလိမ့် မည် ဖြစ်ပါသည်။
ကျော်စွာမိုးရေးသားသည့် Save the People; Don't Protect Generals ကို ဆီလျော်အောင် ပြန်ဆိုဖော်ပြပါသည်။
Ottawa (May 23, 08) – Canadian Friends of Burma (CFOB) welcomes an announcement of the Government of Canada, committing 12 million dollars more for the cyclone relief efforts in Burma.
Hon. Beverley J. Oda, Minister of International Cooperation, makes the announcement this morning May 23, 2008, which brings Canada into the top group donors with 14 million dollars, along with UK: $27 million, Australia: 25 million and USA: $13 million, respectively.
“The additional support announced today means that up to $12 million will be added to Canada's initial $2 million contribution for immediate relief efforts made on May 8, 2008 and to funds that will be raised through the Burma Cyclone Relief Fund announced last week,” said the minister in the statement.
“We welcome this important commitment for the emergency relief efforts in Burma. We always want Canada to do more on Burma. This initial relief effort is quick satisfactory. Meanwhile, we urge the government to respond to the food crisis of 140,000 Burmese refugees along Thai-Burma border,” said Tin Maung Htoo, executive director of Canadian Friends of Burma (CFOB).
“When we applaud the government’s emergency relief efforts for cyclone victims in Burma, we don’t want the government to forget about prolong and protracted sufferings of those refuges on the border,” Tin Maung Htoo added.
Burma 'to let in Western aid workers' 'Too little too late'
Some 2.5 million people have been affected by the cyclone
Burma's top leader has agreed to let all foreign aid workers into the country for relief work in cyclone-hit areas, UN head Ban Ki-moon has said.
African aid helicopters scrambled to Burma
USS Essex navy ship stationed near Burma, ready to help cyclone victims
It's unclear whether the Burmese offer applies to military aid workers -- and whether American naval helicopters stationed off the Burmese coast can join the relief effort.
Burma earlier this week gave permission for just ten UN helicopters to begin relief flights.
But most of these are in Africa, and the UN has asked the US, Britain, Canada and Australia to help transport these large helicopters to Burma.
A BBC correspondent says the helicopters need to be dismantled first and reassembled upon arrival. He says this could takeaweek.
Mr Ban announced the news after talks in Burma's remote capital, Naypyidaw, with Gen Than Shwe.
Burma's military leaders had previously refused to allowafull-scale relief effort by foreign aid workers, and claimed everything was under control.
Mr Ban said he thought Gen Than's decision wasabreakthrough.
"I hadavery good meeting with the senior general and particularly on these aid workers," he said.
"He's taken quiteaflexible position on this matter."
Gen Than also agreed to allow Rangoon airport to be used as an international hub for aid distribution, Mr Ban said.
It is not clear exactly whether he has agreed to give visas to foreign aid workers or let them into the Irrawaddy Delta to deliver aid.
Condoleezza Rice and David Miliband on aid to Burma
But the BBC's Laura Trevelyan, in Burma with the secretary general, says the move does appear to beasignificant breakthrough.
The senior leader had until recently failed to respond to the secretary general's letters and phone calls.
He said he was "very upset" by the devastation he saw, adding that the international community stood ready to overcome the tragedy.
Western governments have backed Mr Ban's visit, calling for pressure on Burma's leadership to do more to help the cyclone victims
UK Foreign Secretary David Milliband told the BBC: "The tragedy is that, for some people it is already too late, and it is certainly too little compared to the needs, but we have got to use the opportunity that exists."
"We've got to keep pushing that door open and working to ensure that those desperate people get the help that they need."
US Secretary of State Condoleezza Rice said the responsibility with the situation lay with the Burmese government.
"It'saquite unusual situation actually that you haveacountry in this desperate straits with its population in the circumstances that this population is in - and you getakind of stone cold face about people who just want help," she told the BBC.
The UN estimates that onlyaquarter of the 2.5 million Burmese affected by the cyclone have received the help they need.
The Red Cross has said that in districts further south-west of those shown to Mr Ban, waterways were still clogged with corpses and that many people had received no aid.
One foreign doctor told the BBC many were drinking water from puddles, while children and old people were suffering from dysentery, dengue fever and dehydration.
Quebec con who weighs 430 pounds gets reduced sent...
Unimin Canada Ltd. fined $200,000 after death of w...
Canada gives $12 million more for relief efforts i...
Burma 'to let in Western aid workers' 'Too little...